Isiswedish-Intanethi ukufunda isiswedish kwi-Skype - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Oku kwenza kuthi ukuba isiqinisekiso umgangatho ukufunda
Iindidi kuba abo ufuna nzulu kwi free indlela, kodwa ngokunxulumene ecacileyo lwenkquboAbo ufuna ngokukhawuleza ukuze iziphumo kwixesha elifutshane. Uqeqesho iqhutywa kwi i-kunxulumana kwendawo indlela, nto leyo esekelwe hayi nenkululeko"cramming"iincwadi zezifundo, interactive iindlela kwaye conversational senzo. Uqala ukuthetha kwi first class, ngokunjalo ekuphuculeni izakhono emamele, ufunda kwaye yokubhala. Uza kukwazi ukukhetha ubunzulu kwaye ixesha izifundo, subjects nootitshala. Thina ngokupheleleyo adapt kuwe ngendlela ukuqulunqa inkqubo kwaye ukhethe uqeqesho mathiriyali. Ukusebenza thina, bonke ootitshala ingaba ngumngeni landmark ukhetho. Apha uza bahlangana eyobuhlobo attitude kwaye efuna ingqalelo iimfuno zabo. Soqeqesho thina sebenzisa umdibaniso zemfundo mathiriyali, ividiyo kwaye enesandi izifundo, live amanqaku nabalandeli iincwadi zezifundo, kuba practicing ezahlukeneyo ulwimi lwezakhono.
Uqeqesho mathiriyali zinikezelwa simahla
Umntu isiswedish izifundo sisebenzisa cheaper kunokuba iqela izifundo rhoqo izifundo ngaxeshanye i isifundo kunikwa Wena ubuqu.
Kwi-bale mihla amazwe langaphandle ulwimi nge-Skype ufundisa ngamnye. Ngokwenza isiswedish-intanethi, wonga yakho, amandla ombane, ixesha ngobuchule get ezifunekayo ulwazi nezakhono. Amava befundisa isiswedish ulwimi kwi-Poland kwaye Sweden. Lokulungiselela exams kwaye uyise ukuba Sweden isiswedish Eziqinisekisiweyo utitshala. Ngaphezulu philological imfundo. Ukufundisa amava ngaphezu kweminyaka. Yokulungiselela ukuthatha iimvavanyo kwaye enze udliwano-ndlebe ngenxa osisigxina yokuhlala. Amava ngaphezu kweminyaka. Lokulungiselela exams. Ushishino isiswedish kwaye kuba departure kuba osisigxina yokuhlala kwaye ilungiselela kuba enze udliwano-ndlebe.
A elinolwazi utitshala we-Swedish ulwimi angeliso amava kwiminyaka ezayo.
Fumana oyedwa indlela wonke lwabafundi.
A elinolwazi utitshala we-Swedish ulwimi kwaye uluncwadi.
Specializiruetsya kwi-ulwimi immersion, incoko senzo kwaye ishishini-Swedish. Ngaphezu kweminyaka wahlala Sweden.
A elinolwazi utitshala we-Swedish kwaye isingesi.
Izifundo kunye Ujulia iya kuba umdla kwaye ngobuchule kuba abo ufuna a elifutshane ukwandisa yakho ubuchule proficiency. Ngaphezu kweminyaka befundisa isiswedish ulwimi. Elinolwazi utitshala, umguquleli, philologist. Ibandakanye ezahlukeneyo ubudala amaqela nganye nganye, kuba kofakwano amava unxibelelwano nge-s speakers ye-Swedish ulwimi, nto leyo constantly ekuphuculeni, tutor kunye iminyaka engama-amava kwaye exabisekileyo amava. Mna specializies kwi oyedwa indlela nganye student kwaye ndiya kuba nguthixo wenu bonisa ubuhle ye-Swedish ulwimi. Izifundo ziya kuba umdla ukuba kunye nabantu abadala nabantwana. Nganye student kukho inkqubo eza uncedo kwi-shortest ixesha mfundisi engundoqo ulwazi ulwimi kwaye ukwandisa yakho inqanaba. Mna ngenene liked i-iiklasi. Utitshala Arina nje super.
Msinyane kangangoko ndinako kuqhubeka uqeqesho kunye naye.
Esikolweni kuba zidlulileyo. Ukuva utshintsho wam ulwimi. Iluncedo kakhulu. Wemiceli-okuninzi ingaba umntu indlela kwaye izifundo kunye utitshala tet tet. Akukho mfuneko inkunkuma ixesha traffic jams, ude ufumane ukuya esikolweni ndifuna Zichaziwe wam umbulelo ukuya esikolweni kuba ithuba ukuhlola Schwyz. Ndiyabulela kuba Yakho umbutho umsebenzi.
ENKOSI ukuthi yam utitshala, Alina, kunye apho sisebenzisa apha inyanga, kuba yayo umntu indlela abafundi.
Iklasi nganye Alina surprised kum nge umdla mathiriyali kwaye unusual iindlela.
kwakukho ezininzi convenient Internet cebo ukufunda i-Swedish ulwimi. Mna kuba zange kubekho nawuphi na iingxaki kule ndawo okanye ukuba ufuna lungelelanisa kwishedyuli. Wam eyona amava kwi-studying ulwimi. Mna engalunganga ndithethe kwi-Swedish, kodwa ukugcina umgangatho ulwimi kwaye uphuhliso"fluency"kufuna isixa senzo. Ngenene okulungileyo utitshala, Nina lula kwaye fun iyanda i-horizons yakhe abafundi. Imibulelo Nina kwaye I. Yesikolo kakhulu okulungileyo kwaye utitshala uyakwazi ukukhetha phezulu ubuqu isuti kwezabo umdla kwaye uluhlu lwezinto ezikhethwayo. Ubuqu, mna ke kakhulu lucky kunye utitshala, Anna, cheerful, sociable umntu, abaya rhoqo nika kwaye uncedo kwi kunzima imeko. I-imathiriyali kanjalo ekhethiweyo inikisa umdla kakhulu, kusekelwe zonke iinkalo, hayi nje memorization ka-isijamani. Enkosi esikolweni kuba umsebenzi omkhulu kuwe iyakwenza ukuba uncedo pupils, abafundi, abadala ukuze kuphunyezwe ezinqwenelekayo. Mna ke kakhulu pleased. Enkosi kwakhona.) Mna beza esikolweni ngokucetyiswa wakhe, umhlobo kwaye ingaba uvuma. Signifying injongo yayo kwaye ixesha isakhelo kuba yayo lwesikhumbuzo, utitshala wakhokela kum phantsi le indlela solwazi. Mna Zichaziwe wam enyanisekileyo imibulelo Tatiana kuba umonde wakhe, inkxaso kwaye akunakho zichaza lo myalezo. Isikolo ndinqwenela uphuhliso kunye nempumelelo kwabo. Ke ngoko kwenzeka okokuba mna luyafuneka kuthethwa isiswedish ngonyaka. Le meko yaba enobunzima nge yokuba zange phambi endiyenzileyo. Waba elizimeleyo nzame ka-ulwimi ukufunda kwi-iimfundiso, kodwa waba ineffective. Kufuneka utitshala. Ukuhamba-hamba kwi kunjalo mna ayikwazanga ngenxa yengqesho. Kutheni ukufunda isiswedish nge-Skype, kwaba bazalwana outlet. Zithe ngokwenza kuba iinyanga kwaye wonke umntu ufumana ndonwabe. Wam utitshala Mariana ngaphambili isebenza kunye enjalo ubudala olunxulumene ababukeli bomdlalo bangene, njengoko i-ingcali kakhulu linalo igunya, njengoko umntu cheerful kwaye okulungileyo-natured.
Umsebenzi lwabalawuli yesikolo, mna kanjalo uvuma.
I-iindidi baba ebibanjwe ngomhla ixesha, kwaye nge unikezelo ka-iindidi ndiya kusoloko walumkisa kwangaphambili yi-imfonomfono. Yesikolo ndiya recommend ukuba bahlobo bam kwaye acquaintances. Zange aye isiswedish ulwimi purposefully, kuphela fitfully kwaye kuphela. Nje ezintandathu kwiiveki ezimbini ka-iindidi kwamnceda ukuba systematize wam ulwazi ukufumana entsha enye. Utitshala Anna wakhela i isifundo ngoko ke, ukuba isifundo ngu ngamandla, kodwa mna ukulawula phantse yonke into. Siyabulela ukuya esikolweni kuba convenient ithuba lokuba bafunde ngaphandle eshiya indlu.
Информации во Visakhapatnam, сериозни
Dating for free. ngaphandle ividiyo incoko Ndifuna ukuya kuhlangana nawe ividiyo Dating nge-girls iwebhusayithi ukuya kuhlangana nawe esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela free iwebhusayithi ividiyo Dating Chatroulette videos get ukwazi ividiyo incoko couples